Flora Borsi sy ny sary tsy fantatra | Famoronana an-tserasera
Ny Surrealism dia efa ela nefa tsy nizara zavatra izay misy ifandraisany lehibe. Tamin'ny taon-dasa dia nanana an'i Sarah DeRemer izahay ny seho foto-kevitra mainty sy fotsy miaraka amin'ny vokatra tsara ary miteraka fahatsapana hafahafa amin'ny fotoana hijeren'izy ireo azy sy handinihany ny antsipirihany. Raha mitady mpanakanto hafa isika dia efa amina sary sokitra manana Anders Krisár izahay de manahirana an'io fa tsara vintana ianao nandeha tamin'ny fampirantiana iray nataon'izy ireo.
Miverina amin'ny delestazy isika miaraka amin'ilay mpanakanto hongroà Flora Borsi izay niaraka tamin'io 22 taona monja mampiseho talenta lehibe amin'ny asany tsirairay avy. Ny fomba fahitany an'izao tontolo izao manodidina antsika dia mavesatra amin'ireo sary ireo izay mamela ny mpijery hitazona ny fofonainy mandritra ny fijeriny ny fahitany ny zavatra sy ny olona.
Tontolon'ny tontolon'ny maso azy manokana a lehilahy mifatotra sy palitao Avy eo dia lasa bitro fotsy manokana izy izay nibanjina ny masony mandriaka amin'ny seho hafahafa sy mahatalanjona.
Sa inona ilay varavarana eo anelanelan'ny lalan'ilay mijery sy ny tsipika faravodilanitra, miorina amin'ny toerana volondavenona.
Lolo nitaingina tarehy vehivavy tsara tarehy manome lalana ny endrika hafahafa mifangaro eo amin'ny olombelona sy ny zava-manan'aina izay miavaka amin'ny metamorphosis-ny.
Io saka io, toy ny lolo, dia lasa ampahany amin'ny sariny manokana miaraka amin'ny mason-koditra sy ireo maso manga mifikitra.
Mpanakanto tena tanora izay tsy maintsy harahina hahita asa amin'ny ho avy ary iza no izany fijery manokana izany izay anananao amin'izao tontolo izao izay ahitantsika rehetra ny tenantsika, manokatra toerana hafa, fahatsapana hafa ary faravodilanitra hafa. Ny tranonkalanao avy amin'ity rohy ity ary azo antoka fa ho hitantsika indray izy amin'ireto faritra ireto hampitana ny tsy fahazoany antoka amin'ny sary mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Surrealism amin'ny sary Flora Borsi